Dhaabni suuqii tahee..Magaalaan oowwitee? -
Dhaabni suuqii tahee..Magaalaan oowwitee?
Duuraan nu fakkaattee
gadheen nutti maltee
Risaan Shimbir nyaatee”
Kunoo hubadhu mee
dubbiin akkas taatee.
Irbuu kalee seenuun
manaa itti bahan
waadaa waliif galan
Arra hoo akkamiin
irbuu san dagatan?
duuba qabsoof moo
bu’aa jala goran?
Qabsaawaa fi hayyuu
Maa wal girgireeysu
Maaliif waliin gallu?
Dhaabni suuqii tahee..
Namuu kara karaan
Tan dhuunfaa banatee
Nuuf himaa mee nutis
Yoo bu’aan jiraatte
Tan sabaa ni dhiifnaa
Yoo garaadhaaf taate.
Eenyu kan baqannee
Gaafas biyyaa yaane
Eenyu kan itti galuuf
Hamma arraan tanaa
Maaliif qisaas goone?
Tags najiib siyaasaa walaloo
Previous Barri 2014 Seenaa Qabsoo Oromoo keessatti waan ittin ibsamu hedduu
Next Gabaasa Kabajaa Ayyaana Waggaa 50ffaa Waldaa Meccaa-Tuulamaa fi Ayyaana Irrecha Magaala Nürnberg biyyaa Jarmaniitti kabjame